Kwi-ExoSpecial, enye yezona zinto zibalulekileyo kuthi kubumfihlo beendwendwe zethu. Olu xwebhu loMgaqo-nkqubo waBucala luqulethe iindidi zolwazi oluqokelelwa luze lurekhodwe yi-ExoSpecial kunye nendlela esilusebenzisa ngayo. Ukuba unemibuzo, nceda unganqikazi uqhagamshelane nathi.
Lo Mgaqo-nkqubo waBucala usebenza kuphela kwimisebenzi yethu ye-intanethi kwaye uyasebenza kwiindwendwe ezikwiwebhusayithi yethu ngokubhekiselele kulwazi olwabelana ngalo kunye/okanye oluqokelelwe yi-ExoSpecial. Lo mgaqo-nkqubo awusebenzi kulo naluphi na ulwazi oluqokelelwe ngaphandle kweintanethi okanye ngeeshaneli ngaphandle kwale webhusayithi.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ngale ndlela iPolisi yethu yabucala kwaye uyavumelana nemigaqo yayo.
Asifane sicele abasebenzisi ngalo naluphi na ulwazi lomntu. Nangona kunjalo, xa sikwenza oko, iinkcukacha zobuqu ocelwe ukuba uzinike, kunye nezizathu zokuba ucelwe ukuba unikezele ngazo, ziya kucaciswa kuwe ngelo xesha sikucela ukuba usinike iinkcukacha zakho.
Ukuba unxibelelana nathi ngqo, sinokufumana ulwazi olongezelelekileyo malunga nawe njengegama lakho, idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni, imixholo yomyalezo kunye / okanye izihlomelo onokuzithumela kuthi, kunye nolunye ulwazi onokuthi ukhethe ukulubonelela.
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya:
Ukubonelela, ukusebenza, kunye nokugcina iwebhusayithi yethu
Ukuphucula, ukwenza umntu, kunye nokwandisa iwebhusayithi yethu
Phuhlisa iimveliso ezintsha, iinkonzo, amanqaku kunye nokusebenza kwazo
Nxibelelana nawe, ngokuthe ngqo okanye ngomnye wamaqabane ethu
Ukuthumelela ii-imeyile, imiyalezo ebhaliweyo okanye imeyile ebonakalayo
Fumana kwaye uthintele ukusetyenziswa ngobuqhetseba okanye ngokungekho mthethweni kwewebhusayithi yethu
I-ExoSpecial ilandela inkqubo eqhelekileyo yokusebenzisa iifayile zelog. Ezi fayile zingena kwiindwendwe xa zindwendwela iiwebhusayithi. Zonke iinkampani zokubamba zenza oku kunye nenxalenye yohlalutyo lweenkonzo zokubamba. Ulwazi oluqokelelwe ngeefayile zelog ziquka iidilesi ze-intanethi (IP), uhlobo lwebrawuza, uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi (ISP), umhla kunye nesitampu sexesha, amaphepha okubhekisela/okuphuma, kwaye mhlawumbi nenani lokucofa. Ezi azidityaniswanga kulo naluphi na ulwazi oluchongekileyo. Injongo yolwazi kukuhlalutya iintsingiselo kunye nokwenza ngcono indawo.
Njengayo nayiphi na enye iwebhusayithi, i-ExoSpecial isebenzisa 'icookies'. Asikuceli imvume yakho yokusebenzisa iikuki. Ezi kuki zisetyenziselwa ukugcina ulwazi oluquka izinto ezikhethwa ngabatyeleli, kunye namaphepha akwiwebhusayithi athe undwendwe lwafikelela kuyo okanye alundwendwelayo. Ulwazi lusetyenziselwa ukwenza ngcono amava abasebenzisi ngokwenza umxholo wekhasi lewebhu ngokweemfuno kuhlobo lwesikhangeli seendwendwe kunye/okanye olunye ulwazi.
Sisebenzisa iintengiso ukwenza imali kwi-ExoSpecial. Abanye babathengisi kwisayithi yethu banokusebenzisa iikuki kunye neebhikhoni zewebhu. Ngamnye kumaqabane ethu entengiso unoMgaqo-nkqubo wabo waBucala kwiipolisi zabo kwidatha yomsebenzisi.
Imigaqo-nkqubo yabucala yamaThengiso
Qaphela ukuba i-ExoSpecial ayikwazi ukufikelela okanye ukulawula ezi cookies ezisetyenziswa ngabathengisi beqela lesithathu.
Umgaqo-nkqubo waBucala we-ExoSpecial awusebenzi kwabanye abathengisi okanye iiwebhusayithi. Ke, sicebisa ukuba ujongane neMigaqo-nkqubo yaBucala yezi webhusayithi zomntu wesithathu ngolwazi oluthe vetshe. Isenokubandakanya izenzo zabo kunye nemiyalelo malunga nendlela yokuphuma kwiinketho ezithile.
Amalungelo abucala e-CCPA (Ungathengisi ngeeNkcukacha zaBucala)
Phantsi kweCCPA, phakathi kwamanye amalungelo, abathengi baseCalifornia banelungelo loku:
Cela ukuba ishishini eliqokelela iinkcukacha zobuqu zomthengi lidize iindidi kunye neengceba ezithile zedatha yobuqu eqokelelwe lishishini malunga nabathengi. Cela ukuba ishishini licime nayiphi na idatha yobuqu malunga nomthengi ukuba ishishini liqokelele. Cela ukuba ishishini elithengisa iinkcukacha zobuqu zomthengi, lingathengisi iinkcukacha zobuqu zomthengi.
Ukuba wenza isicelo, sinenyanga enye yokuphendula kuwe. Ukuba ungathanda ukusebenzisa naliphi lala malungelo, nceda unxibelelane nathi.
Enye inxalenye yethu ephambili kukongeza ukhuseleko kubantwana ngelixa usebenzisa i-intanethi. Sikhuthaza abazali nabagcini babantwana ukuba bajonge, bathathe inxaxheba, kunye/okanye babeke esweni kwaye bakhokele imisebenzi yabo ye-intanethi. I-ExoSpecial ayiqokeleli esazi naziphi na iinkcukacha zoBuqu obuchongiweyo kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-13. Ukuba ucinga ukuba umntwana wakho unike olu hlobo lolwazi kwiwebhusayithi yethu, sikukhuthaza ngamandla ukuba uqhagamshelane nathi ngoko nangoko kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukususa ngokukhawuleza. ulwazi olunjalo kwiirekhodi zethu.
Ngayo nayiphi na imibuzo emalunga nalo mgaqo-nkqubo okanye nayiphi na imisebenzi yethu yabucala, nceda uqhagamshelane ubumfihlo@exospecial.com nangaliphi ixesha.